Pros and cons of ear piercing in children - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Pros and cons of ear piercing in children
မွနျမာလူမြိုးတှဟော မိနျးကလေးငယျတှကေို ကလေးဘဝကတညျးကနားဖောကျပေးတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုနားဖောကျတဲ့အခါ အကွောငျးအမြိုးမြိုးရညျရှယျခကျြအမြိုးမြိုးနဲ့ ဖောကျကွပမေယျ့ ဖောကျသငျ့မဖောကျသငျ့ကို အနညျးနဲ့အမြားတော့ စိတျပူတတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နားဖောကျခွငျးရဲ့ ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုးတှကေိုဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁. နားဖောကျခွငျးကွောငျ့ ကနျြးမာရေးမှာ ကောငျးကြိုးပိုရှိမလာနိုငျပါ။
၂. နားဖောကျခွငျးသညျ နာကငျြမှုရှိသောကွောငျ့ နုနယျသောကလေးအား ဝဒေနာခံစားရစသေညျ။
၃. နားဖောကျခွငျးကို သနျ့ရှငျးသောစကျကိရိယာကိုအသုံးပွုကာ တတျကြှမျးသောသူမှ ဖယေကျပေးရပါမညျ။ သို့မဟုတျပါက ပိုးဝငျကာ အသကျဆုံးရှုံးသညျအထိဖွဈသှားစနေိုငျပါသညျ။
၄. ကလေးငယျအားနားဖောကျပေးပွီး နားကပျ နားဆှဲမြားတပျဆငျပေးပါက ကလေးငယျသညျမထိနျးသိမျးတတျသေးသောကွောငျ့ ပြောကျရှနိုငျသညျ။ သညျ့ထကျဆိုးပါက နားဆှဲညပျသောအခါ နားကိုဆောငျ့ဆှဲသလိုဖွဈပွီး အနာတရဖွဈနိုငျသညျ။ သညျ့ထကျဆိုးပါက ကလေးက ပါးစပျထဲထညျ့ဆော့သညျ့အခါ အသကျရှူလမျးကွောငျးပိတျပွီး အသကျအန်တရာယျရှိနိုငျသညျ။
၅. တနျဖိုးကွီး နားဆှဲတနျဆာဆှဲပါက အန်တရာယျကိုဖိတျချေါနသေလိုဖွဈနနေိုငျသညျ။
၁. အခြို့က ငယျရှယျတုနျးနားဖောကျထားတော့ ကွီးလာမှ နာတာကို သိပွီးအျောငိုတာမလုပျတော့ဘူးဟုဆိုကွသညျ။ အကွောငျးပွခကျြမခိုငျလုံပမေယျ့ ကလေးငယျရုနျးကနျနလြှေငျ လုပျရကိုငျရခကျမညျကတော့အမှနျ။
၂. အခွားသော ရိုးရာယဉျကြေးမှု၊ ဘာသာရေးအရဖောကျခွငျး၊စသောအကွောငျးမြားကွောငျ့ဖောကျခွငျးကို ကနျ့ကှကျနရေနျမလိုသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
ဒါကွောငျ့ နညျးစနဈတကြ သနျ့ရှငျးသောကိရိယာမြားနဲ့ တတျကြှမျးသူမှ နားဖောကျမယျဆိုရငျ၊ ကလေးငယျနဲ့ သငျ့တျောရာကိုသာရှေးခယျြဆကျယငျပေးမယျဆိုရငျတော့ ကနျ့ကှကျစရာမရှိပါကွောငျး တငျပွလိာကျပါတယျ။
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ မိန်းကလေးငယ်တွေကို ကလေးဘဝကတည်းကနားဖောက်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနားဖောက်တဲ့အခါ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖောက်ကြပေမယ့် ဖောက်သင့်မဖောက်သင့်ကို အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်ပူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နားဖောက်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. နားဖောက်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးမှာ ကောင်းကျိုးပိုရှိမလာနိုင်ပါ။
၂. နားဖောက်ခြင်းသည် နာကျင်မှုရှိသောကြောင့် နုနယ်သောကလေးအား ဝေဒနာခံစားရစေသည်။
၃. နားဖောက်ခြင်းကို သန့်ရှင်းသောစက်ကိရိယာကိုအသုံးပြုကာ တတ်ကျွမ်းသောသူမှ ဖေယက်ပေးရပါမည်။ သို့မဟုတ်ပါက ပိုးဝင်ကာ အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိဖြစ်သွားစေနိုင်ပါသည်။
၄. ကလေးငယ်အားနားဖောက်ပေးပြီး နားကပ် နားဆွဲများတပ်ဆင်ပေးပါက ကလေးငယ်သည်မထိန်းသိမ်းတတ်သေးသောကြောင့် ပျောက်ရှနိုင်သည်။ သည့်ထက်ဆိုးပါက နားဆွဲညပ်သောအခါ နားကိုဆောင့်ဆွဲသလိုဖြစ်ပြီး အနာတရဖြစ်နိုင်သည်။ သည့်ထက်ဆိုးပါက ကလေးက ပါးစပ်ထဲထည့်ဆော့သည့်အခါ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
၅. တန်ဖိုးကြီး နားဆွဲတန်ဆာဆွဲပါက အန္တရာယ်ကိုဖိတ်ခေါ်နေသလိုဖြစ်နေနိုင်သည်။
၁. အချို့က ငယ်ရွယ်တုန်းနားဖောက်ထားတော့ ကြီးလာမှ နာတာကို သိပြီးအော်ငိုတာမလုပ်တော့ဘူးဟုဆိုကြသည်။ အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံပေမယ့် ကလေးငယ်ရုန်းကန်နေလျှင် လုပ်ရကိုင်ရခက်မည်ကတော့အမှန်။
၂. အခြားသော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေးအရဖောက်ခြင်း၊စသောအကြောင်းများကြောင့်ဖောက်ခြင်းကို ကန့်ကွက်နေရန်မလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် နည်းစနစ်တကျ သန့်ရှင်းသောကိရိယာများနဲ့ တတ်ကျွမ်းသူမှ နားဖောက်မယ်ဆိုရင်၊ ကလေးငယ်နဲ့ သင့်တော်ရာကိုသာရွေးချယ်ဆက်ယင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကန့်ကွက်စရာမရှိပါကြောင်း တင်ပြလိာက်ပါတယ်။
Tips for Easy Childbirth